Ihe ndị na-akpata oke oke ibu ụmụaka sitere na ọbara mgbali elu ruo na enweghị ùgwù onwe onye - Dị mkpa 2022
Ihe ndị na-akpata oke oke ibu ụmụaka sitere na ọbara mgbali elu ruo na enweghị ùgwù onwe onye
Na-atụ na Mmetụta
Oke ibu na-eto eto na-edobe ụmụaka maka ọdịda ahụike anụ ahụ na nke mmetụta uche. N'ime afọ 30 gara aga, ọnụ ọgụgụ ụmụaka buru ibu amụbaala karịa okpukpu abụọ, na ndị nọ n'afọ iri na ụma, ọ na-amụba okpukpu anọ, dị ka Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa. Nnyocha e bipụtara na American Journal of Hypertension kpughere ka ọnụ ọgụgụ ahụ nwatakịrị na-abawanye ka oge na-aga, otú ahụ ka izu ike na ọbara mgbali elu na-abawanye.
Ndị nchọpụta nyochara 715,000 ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Israel nọ n'agbata afọ 16 na 20. Data sitere na nyocha ahụike ha, nke e nwetara site na 1998 na 2011, gosipụtara njikọ siri ike n'etiti BMI ha na ọbara mgbali elu. Ọnụ ọgụgụ ndị sonyere oke ibu mụbara site na pasent 13.2 na 1998 ruo pasent 21 na 2011, na ịgbaso nke ọma n'azụ bụ ọbara mgbali elu ha. Maka ụmụ nwoke, o si na pasent asaa ruo 28 na pasent abụọ ruo 12 n'ime ụmụ nwanyị.
"Ndị ntorobịa buru ibu na-enwekarị ihe ize ndụ maka ọrịa obi, dị ka cholesterol dị elu ma ọ bụ ọbara mgbali elu," onye na-eduzi ọmụmụ ihe bụ Dr. Yaron Arbel, sitere na Ngalaba Cardiology na Tel Aviv Medical Center, kwuru na nkwupụta mgbasa ozi. "Ha na-enwekarị ibu ibu dị ka ndị toro eto, n'ihi ya kwa, ha nọ n'ihe ize ndụ maka nsogbu ahụike ndị okenye dị ka ọrịa obi, ụdị ọrịa shuga 2, ọrịa strok, ọtụtụ ụdị ọrịa cancer, na ọrịa ogbu na nkwonkwo."
Nsogbu a gbanyere mkpọrọgwụ karịa naanị ọbara mgbali elu, Otú ọ dị. Nwatakịrị na-esiwanye ike na nsogbu mmekọrịta ọha na eze na nke uche, dị ka mkparị na enweghị nkwanye ùgwù onwe onye, ​​ka ha na-atụgharị n'ime ọnọdụ ha buru ibu. Nkatọ ibu arọ na-agafe na osisi ma na-emetụta ndị ọgbọ ọ bụla, mana ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-enwekarị nsogbu n'ihi mgbanwe mgbanwe hormonal na mmekọrịta ndị ọgbọ ha. Ọ nwere ike ime na gburugburu ebe dị iche iche, ma na ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ buru ibu ma ọ bụ ndị buru ibu nwere ike iche mmekpa ahụ na ịkwa emo site n'aka ndị ọgbọ na ọbụna ndị nkụzi, dị ka Obesity Society si kwuo. Ọ na-amalite imetụta onye ọ bụghị nanị na ahụ́ adịghị ahụ́ kamakwa n'ụzọ mmetụta uche. Nke a nwere ike bute nsogbu ogologo oge n'ime ndụ ha toro eto nke na ha agaghị enwe ike itolite.
Nsonaazụ mmekọrịta ọha na eze, kwa, na-agbasa ebe niile maka oke ibu na ndị ntorobịa buru oke ibu ma nwee ike bute onwe onye dị ala ngwa ngwa. Nnyocha gara aga achọpụtala echiche ọha na eze maka oke ibu na ndị buru ibu adịghị mma n'ozuzu ya. A na-ewere ha dị ka ndị umengwụ, ndị na-adịghị mma, ndị na-enweghị ike, enweghị ọzụzụ onwe ha, ndị na-ekwenyeghị ekwenye, ndị na-adịghị akọ na uche, na ndị na-adịghị mma nlereanya.
Nwatakịrị bụ otu n'ime ndị otu kachasị emetụ n'ahụ na ọha mmadụ, na idobe ha n'ụfọdụ echiche efu bụ eleghara anya na oke mkparị na mba ụfọdụ. Ka ụmụaka nke ụwa na-enwekwu ọrịa na-akawanye njọ, iwu na-agbalị ịchọta ebe ha ga-ata ụta. Enwere ezigbo akara n'etiti nleghara anya nne na nna na ịhụnanya nwatakịrị nwere maka nri.
A na-etinye akwụkwọ nleghara ihe oriri na-edozi ahụ n'okpuru nleghara anya anụ ahụ, dịka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike na Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Mmegbu na Nleghara Ụmụaka si kwuo. Ọ na-akọwapụta mgbe nwatakịrị anaghị eri nri ma ọ bụ agụụ na-agụ ya ogologo oge ọ ga-enwe ọganihu na-adịghị mma. Ihe dị mkpa ịghọta ebe a bụ erighị ihe na-edozi ahụ abụghị agụụ, kama ọ bụ nguzozi nke nri na-adịghị mma. Nwatakịrị nke na-eri nri ngwa ngwa na ikpuru mgbe niile na-efunahụ akwụkwọ nri ya, mkpụrụ osisi ya, ọka ya dum, na protein ndị dị mkpa dị mkpa, nke na-ebutekarị ibu ibu ma ọ bụ oke ibu na ihe niile na-agbanwe ndụ ndị na-abịa. na ibu arọ.